Maxkamadda Racfaanka Gobolka Banaadir Oo xayiraad Dhanka Socdaalka Ah kusoo Rogtay Siyaasiga C/Raxmaan Cabdi Shakuur.
Wednesday January 03, 2018 - 15:22:39 in Wararka by Super Admin
Khilaafka u dhaxeeya Hoggaanka dowladda Federaalka iyo siyaasiyiinta mucaaradsan ayaa markale sii laba kacleeyay kadib markii lacago laaluush ah loo adeegsaday garsoorayaasha maxkamadda gobolka Banaadir.
Go’aan kasoo baxay maxkamadda Racfaan gobolka Banaadir oo garsoorayaasheeda ay si toos ah ugu xiranyihiin Villa Somalia ayaa lagu sheegay in xayiraad lagusoo rogay siyaasiga Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur.
Maxkamadda ayaa waxba kama jiraan kasoo qaadday go’aan horay usoo baxay oo dambi ku waayay C/Raxmaan Cabdi Sharkuur, sidoo kale maxkamadda ayaa soo saartay waaral dhigaya in saraakiisha ammaanka ay ka hor istaagaan in uu ka dhoofo garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Siyaasiyiinta Mucaaradsan Farmaajo iyo Kheyre ayaa sheegaya in lacago laaluush ah loo adeegsaday wax ay ugu yeereen Hay'adaha Garsoorka.
Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur oo khilaaf xooggan uu kala dhaxeeyo Farmaajo iyo Kheyre ayaan isna maanta xaadirin fadhigii maxkamadda isagoo sharci darro ku tilmaamay eedaymaha isaga ka dhanka ah.
Go’aanka kasoo baxay Maxkamadda Racfaanka ayaa awood usiinaya Xeer ilaaliyaha DF-ka in uu sii wadi karo baaritaannada lagu hayo eedeymaha ka dhanka ah C/raxmaan Cabdi Shakuur iyo laba xildhibaan oo ku eedeysan ‘Qaran Dumis’.